Locko Gracious: Kisah angling dharma versi bahasa malagasi
Angling Dharma dia angano ao amin'ny Javaney fomban-drazana, izay heverina ho toy ny Fahatongavana ho nofo ny Vishnu, ny sarin 'ny mpanjaka ao amin'ny fanjakan'ny Mlowopati. Iray amin'ireo tombontsoa izy, dia ny fahafahana hahafantatra ny fiteny rehetra biby. Ankoatra izany, dia antsoina koa hoe ho taranak'i Arjona, ny foibe olo-malaza teo amin'ny tantara ny Mahabharata. Nizara patihnya, Batik Madrim afaka manao Mlowopati ho lehibe ny handresy ny sasany ady manan-danja.
Angling Dharma dia fantatra ho toy ny mpanjaka izay hendry. Izy koa malaza afaka handresy ny firenena sy malaza ho manana ny maro samihafa toy ny Kris heirloom Round Geni, Arrow Pasopati, ary ny maro hafa.
Ankoatra ny fasana Mpanjaka Angling Dharma dia misy ihany koa ny fasana ny loham, Batik Madrim ary misy ihany koa ny lava-bato lalina indrindra dia ny lava-bato Bebe Pikulun Dragon King Master Prabu Angling Darma. Ankoatra ny fasana, misy ihany koa ny trano fandroana, izay mbola ao amin'ny keramatkan amin'ny an-toerana.
Hatramin'izao, dia ny fisian'ny ny fasana Mpanjaka Angling Dharma dia mbola mampisaraka satria ny tantara ihany ny vava. Misy boky sy gazety milaza fa, Prabu Angling Dharma efa nijanona tany Bojonegoro amin'izao fotoana izao miatrika ny vanim-potoana ny sazy sy ny fanamelohana ho grouse.
Izy dia nofaizina noho ny andriamani-bavy Uma sy Dewi Ratih noho ny fandikana ny antoka tsy hanambady intsony ho toy ny fanehoana ny fitiavany, andriamani-bavin'ny Setyowati izay namono tena. Fahafoizako anareo, rehefa Dewi Ratih Uma sy hitsapa ny hentitra izany teny fikasana noho ny niseho ho Nenibe sy tovovavy tsara tarehy mitovy ny Goddess Setyowati. Runtuhlahlah ny finoana sy ny Mpanjaka. Ary izany no nanamelohany fanindroany iray goavana vavy tsara tarehy sy ny olona-mihinana vorona toy ny grouse.
Ary tamin'ny diany manaraka, dia tonga tany Wonosari, Bojonegoro sy ny sisa amin'ny tantara izy hanambady Dewi Srenggono, Trusilo, sy Mayangkusuno ary avy eo dia nanana zanakalahy maro.
Ny mpanjaka tsy niverina tany mpanjaka Mlowopati sy ny vadiny sy ny zanany lahy. Rehefa nisy hoe nanafika Mlowopati Pancadnyono goavana mpanjaka, tamin'ny fampodiana ny mpanjaka Mlowopati, dia ny ady no nandresy, na dia Batik Madrim sy ny miaramila no manafotra.
Na izany aza, dia tsy azo antoka na ny Mpanjaka nanorim-ponenana tao Mlowopati mandra-pahatapitry ny fiainana na tsia. Koa mandra-amin'izao fotoana izao dia mbola lavitra adihevitra momba ny toerana misy ny fasana ny Mpanjaka Angling Dharma.
Hatramin'izao, Angling Dharma King ny fasana tao an-tanànan'i Pati dia be nitsidika ny mpanao fivahiniana masina. Ankoatry ny maha-toerana ny fivahiniana masina, ny toerana koa ampiasaina toy ny mpizaha tany, satria teo manintona Nogorojo Spring sy Spring Nogonini mbola tsara tarehy.